China Best Yakakurumbira Chitubu Ruva dhizaina tafura yekudyira seti uye zvipo zvinhu vagadziri uye vatengesi | FUXINGYE
Zvinyorwa: nyowani pfupa china / yakanaka pfupa china
10.5inch yakakomberedza chimiro chemanheru ndiro
Kukura: Dia 26.7 * H3.7cm
8inch kutenderera chimiro dhizeti dhizaini
Saizi: Dia 20.2 * H3cm
8inch yakatenderera chimiro sopu ndiro
Saizi: Dia 20.2 * H5cm
220cc yakatwasuka chimiro mukombe & saucer
Mukombe: Dia8.7 * H5.7cm
90cc yakatwasuka chimiro mukombe & saucer
Saizi Yemukombe: Dia5.6 * H6.7cm
Kukura: Dia9 * H10.5cm
Isu tatsvaga kwese kwese kuti tiite ichi chinonakidza muunganidzwa. mucherechedzo uye runako rusingaperi urwo maruva aya anounza zvichaita ako ese anonakidza kutaurirana ekutanga. Kunze kwekushamisa, edu ese maruva dinnerware zvakare anoshamisa anoshanda uye akasimba futi!
Isu tinoziva kuti mharidzo yakakosha, kunyanya kana zvasvika kumatambo emabiko uye potlucks. Chikafu chedu chemanheru chinogadzirira kushamisika kuti une chokwadi chekurumbidzwa! Kunyangwe iwe uchinakidzwa nemanzwiro azvino uye ezvenguva ino kana akasarudzika masitayera echisikigo, iwe unosarudza uchaita kuti vashanyi vako vatye kana iwe ukavapa iwo ndiro yako.
Nezvekudya kwemanheru, isu kazhinji tine pazasi musanganiswa.
24pcs yekudyira seti
6pcs 10.5inch diner ndiro
6pcs 8inch saladi ndiro
6pcs dhizeti dhizeti
20pcs yekudyira seti
4pcs 10.5inch diner ndiro
4pcs 8inch saladi ndiro
4pcs dhizeti dhizeti
4pcs 220cc mukombe + 4pcs saucer
18pcs yekudyira seti
newewo unogona kusanganisa chero chinhu chaunoda uye sarudza izvo zvinhu: porcelain, nyowani pfupa china kana yakanaka bhonzo china. zvinoshanduka uye zvinoenderana newe.
Inokurudzirwa kuDISHWASHER, MICROWAVE UYE OVEN, Zviri nyore kuchenesa. Yese tafura yezvigadzirwa inogadzirwa uchishandisa chete eco-inoshamwaridzika zvinhu. Iyo yakachengeteka zvachose kune hutano uye yakakwana kushandiswa kwezuva nezuva.
chipo chikuru uye chinofungisisa chezuva rekuzvarwa kweshamwari, Kisimusi, Zuva rekutenda uye mamwe mazuva asingakanganwike. Vachafadzwa kwazvo nezvido zvako zvepachokwadi uye pfungwa dzakanaka.
Kuvhara: bhokisi rakasvibirira kana bhokisi revaravara, Western Europe, Eastern Europe, Turkey, Middle East, Australasia, North America, Central / South America
Nzira yekubhadhara:L / C, T / T.
Pashure: Yakakurumbira Anodikanwa dhizaini dhizaini uye zvipo zvinhu
Zvadaro: Nyika gadheni nhevedzano